Fampiharana ho an'ny iPhone | IPhone News (Pejy 5)
Nanambara i Instapaper fa hajanona ny tolotra omena azy any Eropa manomboka anio noho ny GDPR
Ny serivisy fitehirizana rohy, Instapaper, dia nanambara fotsiny fa manomboka anio, ny andro hanatanterahana ny RGPD vaovao, dia hitsahatra tsy hanome ny serivisy any Eropa.
Castro dia havaozina amin'ny kinova 3 ary mitondra Castro Plus
Castro, iray amin'ireo mpilalao podcast tsara indrindra, novaina ho amin'ny andiany faha-3 ary mitondra Castro Plus, fampiharana ho an'ny Apple Watch ary maro hafa.
Ny USB C an'ny Apple mankany amin'ny tariby dia mampidina ny vidiny
Efa hatry ny ela ny tariby sy ny mpampitohy USB C ary nanomboka ny fampiharana azy tamin'ny fahatongavan'i ...
Evernote dia mamela ny fampiasana AirPods handika feo ho an'ny lahatsoratra amin'ny fanavaozana farany
Ny fampiharana Evernote iOS dia nohavaozina miaraka amin'ny endri-javatra sy fanatsarana vaovao. Ny tena zava-dehibe dia izao azonao atao ny mampiasa ny AirPods anao hanampiana naoty amin'ny alàlan'ny feonao
Dobo an'i Dr. Panda, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Manomboka anio ary mandritra ny fotoana voafetra dia afaka maka maimaimpoana ny lalao Dr. Panda's Pool izahay, fampiharana iray izay hikarakaran'ireo ankizy kely biby 5 raha mankafy ny pisinina miaraka amin'izay rehetra tafiditra ao izy ireo.
Iron Throne, miadia ho mpanjaka eo amin'ireo mpilalao manerantany
Azo atao izao ny Iron Throne, ny Netmarble MMO farany izay tsy maintsy hatrehana mpilalao am-polony amin'ny fotoana tena izy mba ho mpanjakanao amin'ny seza fiandrianana vy.
Azo alaina amin'ny PUBG izao ny sari-tany efitra vaovao any Miramar miaraka amina endrika vaovao marobe
Ny lalao Karazana Battle Royal, PUBG amin'ny endriny ho an'ny fitaovana finday dia vao nohavaozina tamin'ny fampidirana ny sari-tany Miramar vaovao, sarintany izay efa misy amin'ny solosaina sy Xbox.
Milalaova ny Star Wars Holochess amin'ny iPhone
Misaotra ny iPhone sy ny fampiharana Disney, azonao atao ny milalao ny Star Wars Holochess maimaimpoana amin'ny fampiasana zava-misy marina.
Ny "mode war" PUBG dia mety ho hita tsy ho ela ho an'ny iOS
Ny Beta 0.6.3 vaovao amin'ny lalao PUBG malaza izay azon'ireo mpampiasa misoratra anarana manokana ao ...
Google Photos dia hahafahantsika mandoko ny sary mainty sy fotsy, manala ny fiaviany ary maro hafa
Google dia nanolotra ny sasany amin'ny vaovao manaraka izay ho tonga amin'ny endrika fanavaozana ny iOS sy ny fitaovana Android an'ny tolotra Google Photos-ny
Nohavaozina ny WhatsApp amin'ny alàlan'ny fanampiana ny horonan-tsary ao anaty varavarankely Instagram sy Facebook
Ny rindranasan-kafatra hafatra WhatsApp dia namoaka fanavaozana vaovao izay misy fiasa vaovao maromaro mifandraika amin'ny filalaovana horonantsary amin'ny varavarankely mitsingevana ary safidy vaovao ho an'ny mpitantana.
Google dia nanisy fampiasa Snooze nandrasana hatry ny ela ho an'ny fampiharana Gmail ho an'ny iOS
Google dia manampy amin'ny fampiharana Gmail ho an'ny iOS ny iray amin'ireo lahasa andrasana indrindra amin'ny mpampiasa rehetra, ankehitriny dia afaka ahemotra ny mailaka handray azy ireo amin'ny daty sy ora hafa.
Halide, manampy fanohanana ny Apple Watch, famantaranandro ary maro hafa
Raha te hahazo tombony betsaka amin'ny iPhone isika rehefa maka sary, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hita ao amin'ny App Store ny Halide, fampiharana izay manana vidiny 6,99 euro.
Apple Podcast dia nihoatra ny 50.000 tapitrisa alaina
Ny podcast Apple dia nihoatra ny 50.000 XNUMX tapitrisa ny fampidinana ary mirongatra ny fanantenana noho ny fisondrotan'ity karazana ity.
Apple dia mandoa outlet sasany hanolotra atiny manokana ao amin'ny Apple News
Ny sehatry ny vaovao ao amin'ny Apple News, te-ho lasa benchmark hitana ny boky fanamarinana ary nanomboka nandoa ny mpanonta isan-karazany hampiseho ny atiny manokana.
Manao veloma ny Opera VPN, fa eto ianao manana safidy hafa
Opera, ilay mpizaha tena hafa indrindra, dia nanidy ny fampiharana VPN ho an'ny iOS, Opera VPN. Fa asehoko anao ireo safidy roa tena tsara.
Star Wars: Galaxy of Heroes no lalao anio
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, androany ao amin'ny magazay fampiharana iOS izay ananantsika ho toy ny lalao androany: ...
Instagram dia miomana ny handefa ny fividianana vokatra ao amin'ny app
Instagram dia miomana hanao laharana lehibe eo amin'ny latabatra amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fandoavana ny vokatra amin'ny alàlan'ny fampiharana ny tambajotra sosialy manokana.
Outlook ho an'ny iOS dia hahazo fampiasa vaovao atsy ho atsy
Microsoft dia nanambara ny sasany amin'ireo vaovao ho avy izay ho tonga amin'ny fampiharana iOS sy ny pejin-tranonkala afaka herinandro vitsivitsy.
Spotify dia mahatratra 75 tapitrisa ny mpanjifa mandoa vola
Ireo tovolahy avy ao Spotify dia manamarika tsangambato iray vaovao nahatratra 75 tapitrisa mpampiasa mandoa ary efa ho 170 tapitrisa ireo mpampiasa mavitrika manerana ny lampihazo.
Fortnite dia manomboka ny vanim-potoana 4 miaraka amin'ny toerana sy fiasa vaovao
Ny fanavaozana farany Fortnite dia manome toerana vaovao antsika noho ny fianjeran'ny komet izay nianjera tao amin'ilay nosy.
Niala tamin'ny Facebook ny mpanorina ny WhatsApp noho ny olan'ny fiarovana ny angona
Ny mpiara-manorina ny WhatsApp dia nanapa-kevitra ny handao ny Facebook aorian'ny olan'ny orinasa amin'ny famoahana angona ho an'ny orinasa Cambridge Analytica.
Nintendo dia manohy miloka amin'ny iOS ary handefa ny lalao RPG lalao Dragalia Lost
Miaraka amin'ny tanjona hitohizan'ny fitomboana eo amin'ny tsenan'ny smartphone, Nintendo dia handefa ny Mario Kart malaza amin'ny taona 2019 ary amin'ity taona ity ny hetsika RPG lalao Dragalia Lost, izay hisy fiatraikany lehibe eo amin'ny tsena aziatika.
Matoky ny Spotify fa hanohana azy i Eropa amin'ny ady ataony amin'ny Apple Music
Spotify dia nanantona ny fanantenany tany Eropa mba hanarahany ny fangatahany amin'ny ady atao amin'ny Apple Music
Ny Snapseed an'i Google dia mifanaraka amin'ny efijery iPhone X ihany amin'ny farany
Ny tonian-dahatsoratr'i Google, Snapseed, dia nahazo ny fanavaozana ihany tamin'ny farany izay mamela azy 100% hifanaraka amin'ny efijery 5,8-inch an'ny iPhone X
Harry Potter: Howarts Mistery dia mivoaka izao, saingy hampahatezitra anao izany amin'ny micropayments
Tsy vao sambany io lalao video na fanombohana rindrambaiko finday lehibe io no nosimbain'ny ...
Nanavao ny fampiharana i Amazon mba hifanaraka amin'ny efijery an'ny iPhone X
Ny fampiharana Alexa, izay ahafahantsika mitantana sy mifanerasera amin'ireo fitaovana maranitra Amazon Echo, dia navaozina farany tamin'ny efijery 5,8-inch miaraka amin'ny notch an'ny iPhone X.
RememBear izao dia ofisialy
Ho antsika rehetra izay niandry ny famoahana ofisialy an'i Remembear, mpitantana teny miafina mampanantena, dia eto ary holazaiko anao ny pitsopitsony rehetra.
Snapchat dia tsy kivy, fa mizaha interface tsara vaovao ho an'ny Tantara
Ireo tovolahy avy amin'ny Snapchat dia manohitra ny fisondrotan'ny Instagram manandrana amin'ny fomba rehetra hanomezana fahafaham-po ny mpampiasa azy ireo amin'ny alàlan'ny fampidirana rafi-pitantarana vaovao.
Fortnite dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana grenady limpet ary bokotra vaovao hitifitra
Ireo tovolahy ao amin'ny Epic Games dia manohy manavao ny rindranasa ary vao avy nanisy fitaovam-piadiana vaovao: grenady limpet, grenady iray raha vao tafakatra ambonin'ny tany ianao dia tsy afaka miainga mihitsy.
Ny app eBay dia ahafahantsika manampy vokatra amin'ny alàlan'ny fanovana ny kaody barcode
Ny fampiharana hivarotana vokatra amin'ny alàlan'ny Internet, eBay, dia nahazo fiasa vaovao izay mamela antsika hanisy entana amidy amin'ny kaody barcode ihany.
Afaka mandefa sary sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny hafatra amin'ny alàlan'ny Twitterrific izahay izao
Ny fanavaozana farany ny Twitterrific ho an'ny iOS sy macOS dia mamela antsika handefa sary sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny hafatra mivantana.
Tranonkala 7, ny fomba tsara indrindra ahazoana miditra mivantana amin'ireo pejin-tranonkala tianao indrindra 7 eo noho eo
7 Web dia rindranasa maimaimpoana mifanaraka amin'ny iPhpne sy ny iPad izay ahafahanao miditra mivantana amin'ny atin'ny pejy web na vavahady fito izay manapa-kevitra.
Fortnite dia havaozina miaraka amin'ny maody lalao vaovao sy fitaovam-piadiana vaovao
Taorian'ny fanesorana ny balafomanga nitarina, Battle Royale dia nanavao ny fampiharana Fortnite ho an'ny App Store amin'ny alàlan'ny fanampiana fitaovam-piadiana vaovao ary mamela ny mpampiasa hilalao ny maody vaovao.
PUBG ho an'ny iOS dia havaozina amin'ny arcade mode sy ny fanatsarana maro
Ity fahatongavana farany farany amin'ny iOS App Store ity dia mitondra, ankoatry ny zavatra hafa, ny mode arcade vaovao izay mavitrika kokoa sy mora kokoa ny milalao fotoana fohy kokoa, saingy tsy izy ireo ihany no vaovao.
Apple dia afaka mampitombo ny fampidinana app anao hatramin'ny 800%, raha misafidy ianao
Ny fampiharana nofidian'i Apple hisongadina ao amin'ny App Store dia afaka mampitombo ny fampidinana anao hatramin'ny 800% ao anatin'ny herinandro
Sleep Cycle dia miaraka amin'ny vaovao amin'ny Apple Watch ihany koa hanaraha-maso ny torimasoo
Fampiharana tranainy sy malaza amin'ity sehatry ny fikajiana ny tany ity dia Seleep Cycle, ary ankehitriny dia misy fiasa vaovao sasany ao amin'ny Apple Watch.
Netflix dia mampiseho sombintsombiny mitsivalana amin'ny atiny mandritra ny telopolo segondra
Ny olan'ny fitsanganana an-tsary dia voavahan'i Netflix izay haseho izao telopolo segondra ny horonan-tsary amin'ity endrika ity.
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia tonga ao amin'ny mpandika tenin'i Microsoft
Noho ny fahakingan-tsaina artifisialy, ny mpandika teny Microsoft dia matanjaka sy manan-tsaina kokoa ankehitriny ary mamela antsika hampiasa azy io tsy misy fifandraisana Internet.
Ny Dropbox dia manohana ny fisintomana sy ny fianjeran'ny iPad
Ny serivisy fitahirizana rahona Dropbox dia nohavaozina nanampy fanampiana ho an'ny fiasa hisintona sy hitete izay tonga tao amin'ny iOS miaraka amin'ny kinova iraika ambin'ny folo.
Ahoana ny fomba hahitana ny satan'ny fiantohana ny iPhone amin'ny alàlan'ny fampiharana «Apple Support»
Apple dia manolotra fampiharana ho an'ny iOS —iPhone sy iPad— avy amin'ny Apple Support. Amin'izany dia azonao atao ny manamarina ny fiantohana ny fitaovanao haingana sy mora
Fortnite dia manomboka matanjaka, ny fidiram-bolany dia mitombo hatramin'ny $ 25 tapitrisa ao anatin'ny iray volana
Fortnite dia manohy manapaka firaketana. Nahazo buzz be dia be tamin'ny rafitry ny lisitry ny fiandrasana izy, ary nahatratra $ 25 tapitrisa ankehitriny ny vola azony tamin'ny volana voalohany.
Mandrosoa miaraka amin'i Orbia, lalao iOS mampiankin-doha amin'ny mekanika tsotra
Ny lalao dia antsoina hoe Orbia ary hahatonga anao hanana fotoana mahafinaritra amin'ny iPhone tsy misy fahasarotana be loatra, ilay lalao mahazatra izay mora tanterahina nefa sarotra fehezina.
Nangataka tamin'i Apple i Russia mba hanala ny fampiharana Telegram ao amin'ny App Store
Nangataka tamin'i Apple ny governemanta Rosiana mba hanaisotra ny fangatahana Telegram ao amin'ny App Store Rosiana, taorian'ny nanakanana ny fampiasana ilay fangatahana tao amin'ny firenena.
Ity no endrika vaovao an'ny Spotify
Miaraka amin'ny vaovao sy fanavaozana rehetra izay avy amin'ny Spotify tato ho ato, ny endrika Spotify vaovao dia nahatratra vitsivitsy taminay ary hasehonay anao.
Chrome ho an'ny iOS dia ahafahantsika mandefa teny miafina voatahiry
Ny fanavaozana farany ny Chrome ho an'ny iOS dia mamela antsika hanondrana ny teny miafina rehetra voatahiry ao anaty tranokalanay amin'ny rakitra .cv
Ahoana ny fomba hanampiana sticker amin'ny Telegram
Raha reraka amin'ny fampiasana ireo sticker ihany ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba ahafahanay mampiditra stiker vaovao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegram.
Spotify dia hanavao tanteraka ny fampiharana ampiany fanaraha-maso ny feo
Ny orinasa soedoà Spotify dia afaka nanolotra amin'ny herinandro ambony, amin'ny hetsika kasaina hatao ny 24 aprily, fanavaozana tanteraka ny fampiharana azy ho an'ny fitaovana finday manambatra mpanampy am-peo.
Ny fanontana faharoa an'ny Touchgrind BMX dia tonga tao amin'ny AppStore ary nandresy
Ankehitriny ny kinova nomerika an'ity karazana lalao ity dia mandresy ao amin'ny App Store miaraka amin'ny Touchgrind BMX 2, lalao iray ahafahanao manamboatra ny mini BMX anao ary manana fotoana mahafinaritra.
Doppler, fampiharana mozika ivelan'ny Internet ho an'ny iPhone izay mampanantena fampiorenana tsy misy iTunes amin'ny ho avy
Doppler dia rindranasa vaovao ho an'ny iPhone izay ahafahanao mitantana ny tranomboky mozikao ivelan'ny Internet. Ho fanampin'izany, mampanantena ny fampifanarahana atiny ho avy tsy mila iTunes izy.
iMovie dia nohavaozina tamin'ny alàlan'ny fanohanana ny efijery Super Retina an'ny iPhone X
Ny mpamoaka horonantsary an'i Apple iMovie dia nahazo fanavaozam-baovao vaovao izay mampifanaraka azy amin'ny iPhone X ankoatry ny fanolorana fanampiana ho an'ny Metal.
Tsy irery ianao fa efa maty nandritra ny 12 ora i Fortnite
Tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, ny lalao malaza Fortnite dia tsy niasa nandritra ny 12 ora, ary tamin'izay fotoana izay dia nijanona tsy niasa intsony ireo mpizara.
Fortnite dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana zavatra vaovao: fort fort
Ireo tovolahy ao amin'ny Epic Games dia namoaka fanavaozana Fortnite vaovao izay nanampian'izy ireo zavatra vaovao: fort fort.
Spotify dia te-hanitatra ny safidin'ny kinova maimaim-poana
Araka ny Bloomberg, ny kinova Spotify maimaim-poana dia mety hahazo fanatsarana lehibe amin'ny fanavaozana ho avy.
Nakatonin'i Steve Wozniak ny kaonty Facebook-ny taorian'ny raharaha ratsy nataon'i Cambridge Analytica
Steve Wozniak, mpiara-manorina an'i Apple dia nilaza fa tonga ny fotoana hanidiana ny kaontiny amin'ny tambajotra sosialy Facebook.
Banco Santander dia manohy miloka amin'ny Apple Pay ary manatsara ny fampiharana azy
Farany dia misy ny hitsin-dàlana amin'ny fandidiana sy ny widget amin'ny fampiharana Banco Santander, andao jerena izay vaovao.
Firefox dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanamoriana
Ny fanavaozana farany ny Firefox ho an'ny iOS dia mampihetsika ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fanamoriana, mba hahafahantsika mivezivezy am-pitokisana nefa tsy mila mahatadidy ny hampihetsika ity asa ity.
Dr. Cleaner, esory ny fifandraisana sy ny sary dika mitovy amin'ny iPhone-nao
Dr. Cleaner dia rindrambaiko ho an'ny iOS —iPhone sy iPad— izay ahafahanao mamafa sary sy fifandraisana misy dika mitovy ary manana tahiry malalaka kokoa
HomePass, ilay fampiharana adinon'i Apple ny manampy azy amin'ny HomeKit
HomePass for HomeKit dia fampiharana tsy maintsy ananana ho an'ireo izay manana kojakoja automatique any an-trano Apple ary tsy te hanana olana amin'ny famoahana kaody fampandehanana.
Hanara-maso ny atiny YouTube Kids fa tsy ny algorithma toy ny teo aloha
Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay dia maro amintsika no ray aman-dreny izay tsy mamela ny zanatsika hampiasa ...
Apple dia manome antsika ny lalao piozila mahafinaritra Starman amin'ny alàlan'ny fampiharana Apple Store
Raha te hitahiry ny vola 4,49 euro izay vidin'ny Starman ho an'ny iOS ianao dia azonao atao ny manararaotra ny famelan'ny Apple anay hampidina azy io maimaimpoana amin'ny alàlan'ny app Apple Store.
Ampitao ny teny 2, lalao teny kely ho an'ny mpampiasa rehetra
Pass The Word 2, safidin'ny minigames amin'ny teny fampandrosoana Espaniola izay hahatonga anao hanana fotoana mahafinaritra amin'ny fomba mora sy mahazo aina indrindra.
Azonao atao izao ny milalao Fortnite amin'ny iPhone sy iPad tsy misy fanasana
Io no iray amin'ireo famoahana malaza indrindra tamin'ny taona. Ilay lalao efa nanaparitaka horonantsary horonantsary elaela ihany ...
Adobe Photoshop Express dia havaozina amin'ny safidy vaovao rehefa mitahiry sary
Ny mpamoaka sary Adobe Photoshop Expres mahafinaritra dia vao nohavaozina ary nanampy fampiasa iray izay takian'ny mpampiasa maro an'ity fampiharana ity rehefa mitahiry ny sarin'izy ireo novaina.
Navaozina amin'ny fiteny vaovao ny PUBG, ao anatin'izany ny Espaniôla
Ny lalao PUBG dia nahazo fanavaozana vaovao izay misy amin'ny teny espaniola ihany amin'ny farany, ankoatry ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fitaovana taloha.
Tonga ny Marvel Strike Force ho anao hankafizanao ireo maherifo tianao indrindra amin'ny iPhone-nao
Notsapainay ny lalao video izay tonga andro vitsy lasa izay tao amin'ny iOS App Store hahafahanao misafidy ireo maherifo tianao indrindra ary hiara-hiasa hamita ny iraka ampanaovina azy ireo.
Apple dia mandefa ny fampiharana fahitalavitra any Mexico
Vao avy nandefa ny fampiharana fahitalavitra tany Mexico i Apple, mba hampivondrona ao anaty rindrambaiko tokana ny serivisy streaming rehetra anananao amin'ny fitaovanao.
Ny rindranasa mifanaraka amin'ny ARKit, indrindra ny lalao, dia manangona fisintomana 13 tapitrisa
Enim-bolana taorian'ny nanombohana ny iOS 11, sy ny sehatra fampitomboana ny zava-misy ARKit, mahatratra 13 tapitrisa ny fampidinana ireo lalao sy fampiharana mifanentana.
Mini Golf King, iray amin'ireo lalao golf mini tsara indrindra azo alaina ao amin'ny App Store
Raha mitady lalao hankafizantsika ny Mini Golf isika, Mini Golf King dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra izay hitantsika ao amin'ny App Store anio.
Ny pejy, isa ary keynote dia havaozina miaraka amin'ny endrika vaovao ihany koa
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nanararaotra ny fankalazana ny laharam-pahamehana fampisehoana iPad 2018 handefasana andiam-pikarohan'izy ireo mikendry ny sehatry ny fanabeazana, na dia tsy izany irery.
Ny Clips sy ny GarageBand dia havaozina amin'ny endrika fanabeazana vaovao
Apple dia namoaka fanavaozana vaovao roa an'ny Clips sy GarageBand fampiharana, izay ahitanay asa vaovao mikendry ny fanabeazana.
iBooks dia mety ho tonga amin'ny iOS 12 miaraka amin'ny fijery sy fahatsapana mitovy amin'ny App Store
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa ny fivarotana boky an'i Apple, iBooks dia mety hiharan'ny fanovana lehibe amin'ny fahatongavan'i iOS 12, miaraka amina fiasa sy endrika mitovy amin'ny App Store ankehitriny.
Ny fampiharana Android Wear dia nomena anarana hoe Wear OS
Taorian'ny nanovana ofisialy ny anarana, avy amin'ny Android Wear ka hatramin'ny Wear OS, Google dia namoaka fanavaozana ny rindranasa izay efa mampiseho amintsika ny anarana
Google Maps dia nohavaozina ary manampy anao amin'ny famandrihana latabatra ao amin'ny trano fisakafoanana tianao indrindra
Google Maps ho an'ny iOS dia manampy fampiasa vaovao: izao dia hanana fampahalalana tena izy izahay momba ny satan'ireo trano fisakafoanana tianay hitsidika
PUBG Mobile dia miteraka fahatsapana sy fahatsapana manokana
PUBG ho an'ny fitaovana finday izao dia misy ary safidy tsara hafa (na add-on) an'ny Fortnite, mihoatra izany amin'ny zava-misy sy amin'ny lalao.
Ny app Apple Store dia saika nohavaozina tanteraka
Ny rindranasa Apple Store dia nohavaozina taorian'ny fanavaozana farany nanampy vakizoro vaovao ary koa manala ny sasany amin'ireo mpampiasa be mpampiasa indrindra.
Telegram dia mahatratra 200 tapitrisa mpampiasa miaraka amin'ny fanavaozana vaovao sy mahaliana
Ny fampiharana Telegram dia nahazo fanavaozana vaovao miaraka amin'ny News marobe, mba hankalazana fa nahatratra 200 tapitrisa ireo mpampiasa azy ireo.
Azo apetraka amin'ny iPad izao ny paste 2
Taorian'ny nahombiazany tamin'ny Mac dia nanambara ny fampiharana azy ireo ho an'ny iOS efa ela izy ireo. Ankehitriny dia fampiharana navoaka tao amin'ny App Store izy, tsy miova ny tahan'ny fanavaozana ary miavaka ny fanatsarana.
Torolàlana Fortnite ho an'ny vao manomboka, na ny fomba maharitra mihoatra ny iray minitra amin'ny lalao amin'ny taona
Torohevitra fototra ho an'ireo izay vaovao amin'ny Fortnite ary maniry hankafy ity lalao ity izay miteraka fahatsapana. Aiza no hipetraka, inona ny fitaovam-piadiana alaina ... izay ilainao rehetra mba tsy hovonoina vantany vao miantsona ianao.
Ahoana ny fomba hamafana kaonty Facebook
Voasimba ny filaminana sy ny fiainana manokana ao amin'ny Facebook. Eto izahay dia manazava ny fomba famonoana vonjimaika sy ny fomba hamafana maharitra ny kaonty Facebook anao.
Ny Kindle ho an'ny iPad izao dia manohana ny fomba fisarahana
Ny rindranasa Kindle ho an'ny iPad dia navaozina izao mba hifanaraka amin'ny lahasa iPad Split Screen manokana.
Fortnite dia mahazo fidiram-bola $ 1,5 tapitrisa ao anatin'ny 5 andro monja
Tsy manana fisalasalana isika fa ny lalao manapotika ny iOS App Store izao ary ...
Ny tweak mahafinaritra, iCleaner Pro, dia efa azo alaina ao amin'ny iOS 11, ka raha miandry fotoana ianao hanadiovana ny terminal anao dia azonao atao izany raha tsy misy olana mifanentana.
Google Lens dia misy amin'ny iPhone sy iPad izao
Google Artigence Intelligence tonga amin'ny iOS. Ary manao izany amin'ny Google Lens, iray amin'ireo fiasa izay hanome anao fampahalalana bebe kokoa momba ny sarinao.
Spotify dia hanana fikarohana am-peo hangataka mozika aminao amin'ny iPhone
Andro vitsy lasa izay dia hitantsika ny fomba nilalaovan'ny Spotify ilay hevitra handefasana ny mpandahateny azy manokana, ary amin'ny maha-mpandahateny azy, inona ny Apple Music ho an'ny HomePod. Raha mahazo ny mpandahateny anao ianao dia miharihary ny mieritreritra fa hanana fomba ifaneraserana izy io, ary toa asehon'ny zava-drehetra fa hiaraka amin'ny feontsika io.
Niantic dia mamela antsika hiditra amin'ny Pokémon GO amin'ny kaonty Facebook sy Google
Niantic, mpamorona ny Pokémon GO, dia efa mamela anao hampifandray kaonty Facebook sy Google.
Milalao Fortnite miaraka amin'ny iPhone X
Fortnite dia azo alaina ho an'ny iOS ary amin'ny iPhone News dia afaka nisedra azy izahay. Atorinay anao amin'ny horonantsary ny fomba fiasan'izy io amin'ny iPhone X
Swiftkey dia mandefa bara ho an'ny fanavaozana farany
Ny kitendry Microsoft, Swiftkey dia nohavaozina, manatsara kokoa ny asany raha azo atao sy ny isan'ny safidy natolony antsika hatreto.
Fortnite ho an'ny iOS izao no misy, atorinay anao ny fomba hahazoana fanasana hilalao
Ireo tovolahy avy amin'ny Epic Games dia mandefa Fortnite ho an'ny iOS, eny, tsy maintsy miandry filaharana virtoaly vao milalao. Lazainay aminao ny fomba hanombohana milalao Fortnite ho an'ny iOS.
Tsy hizara ny mombamomba anao amin'ny Facebook i WhatsApp, amin'izao fotoana izao ...
Mampanantena ireo tovolahy avy ao amin'ny Facebook fa tsy hizara data amin'izy ireo ny WhatsApp raha tsy mahafeno ny fepetra takian'ny fitsipika eropeana izy ireo.
Ento ny takelaka ataonao na aiza na aiza amin'ny Paste 2, izay azo alaina amin'ny iOS ankehitriny
Ny rindranasa ho an'ny Mac, Mametaka 2, dia tonga ihany koa amin'ny iOS, mba hahafahantsika mijery ireo atiny rehetra voatahiry ao amin'ny Mac avy amin'ny iPhone -ntsika ary ny mifamadika amin'izany.
Ireo rehetra momba ireo sakana ao Telegram
Azavainay ny fomba fanakanana ireo mpampiasa amin'ny Telegram. Ahoana no hahafantarana raha voasakana ianao ary, ho fanampin'izany, hitory ireo mpampiasa, fantsona ary vondrona ho toy ny spam.
Overcast, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hihainoana podcast, dia havaozina miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Ny fampiharana podcast Overcast malaza dia nohavaozina tamin'ny fampidirana fiasa vaovao mahaliana izay mamintina ireo podcast henontsika.
Ahoana ny fomba famonoana ireo fampandrenesana avy amin'ny Messages avy amin'ny fampiharana Senders tsy fantatra
Raha reraka ianao mandray hafatra amin'ny alàlan'ny iMessage avy amin'ny mpandefa fanta-daza sy voatahiry ao anaty fandaharam-potoananay, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hialana amin'izany.
Ny fampiharana Google Assistant dia mifanaraka amin'ny iPad ankehitriny
Ny mpanampy Google, Google Assistant, dia tonga teo amin'ny iPad, mba hahafahantsika mampiasa azy io amin'ny iPad antsika amin'ny fotoana rehetra.
Textor, mamorona ary ovao ny lahatsoratra TXT amin'ny iPhone sy iPad maimaim-poana
Mitady tonian-dahatsoratra an-tsoratra tsotra ho an'ny iPhone na iPad-nao? Raha manana iOS 11 napetraka ao amin'ny solosainao ianao dia Textor no tadiavinao
Ny fampiharana Alexa ho an'ny iPad dia ahafahanao miantso ny Amazon Echo avy amin'ny iPad
Ny fanavaozana farany ny fampiharana Alexa dia mamela antsika hanao antso an-tariby eo anelanelan'ny iPad sy ny fitaovana Amazon Echo izay nifandraisantsika.
Atsaharo ny fifandraisana ato amin'ny WhatsApp
Azavainay ny tokony hataonao mba hanakanana ny fifandraisana amin'ny WhatsApp. Raha manelingelina anao ny isa iray ary tianao ny manakana azy amin'ny WhatsApp mba tsy handefasany hafatra bebe kokoa dia ireto no dingana tokony harahinao.
Marline, ny fampiharana tsara tarehy indrindra mahita ny onja, ny volana ary ny toetrandro
Marline dia fampiharana iray ahafahanao manamarina ny onja, ny fizaran'ny volana ary ny toetrandro amin'ny fomba hafa. Amin'ny fomba tsotra sy tsara tarehy. Zavatra iray nahatonga ahy hitia tamin'ny fotoana voalohany nahitako azy.
Ny mpitantana teny miafina tsara indrindra ho an'ny iOS
Raha mbola mieritreritra ianao fa ny mpitantana ny teny miafina dia tsy ilaina isan'andro isan'andro, etsy ambany dia asehoko anao hoe iza no mpitantana teny miafina tsara indrindra ary inona avy ireo asany lehibe.
Manitatra ny fotoana ahafahanao mamafa ireo hafatra ny WhatsApp
Apple dia mampitombo ny fotoana ahafahantsika mamafa fa efa nalefanay. Azavainay ny fomba fanaovana izany ary hialana amin'ny olana noho ny hafatra diso.
MacTracker dia efa manolotra fampahalalana momba ny HomePod
Ny fampiharana MacTracker dia navaozina ary nanampy ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny vokatra farany natombok'i Apple teny an-tsena, ny HomePod.
Elk, mpanova vola be ary fika lehibe
Misy ny rindranasa vita tsara sy tena tsara ka mahamenatra ny tsy mampiasa azy ireo matetika kokoa. Iray amin'ireo fampiharana ho ahy i Elk. Ny asany tokana dia ny mamadika vola ary tsy zavatra ilaiko amin'ny andavanandrom-piainako izany.
Bobby, fomba tsotra hanarahana ny famandrihana
Bobby dia mpitantana famandrihana maimaim-poana ho an'ny iPhone. Io no fomba tsara indrindra hitazomana ny fandoavam-bola rehetra alohan'ny daty
Snapchat sy Instagram Stories dia ho hita ao amin'ny Netflix ihany koa
Ny zazalahin'i Netflix, lavitra ny mandao ny fampiharana azy ireo, dia manohy manampy fiasa vaovao toy ny zava-baovao manaraka izay ho tonga afaka herinandro vitsivitsy, Netflix Stories, fomba haingana sy mora hanadinana atiny vaovao nefa tsy ahodin-doha ny finday avo lenta.
Google dia nampiroborobo ny Andro Mario tamin'ny 10 martsa tao amin'ny Google Maps
Vonona ny hankalaza ny Mario Day ry zalahy avy amin'ny Google amin'ny alàlan'ny fahatongavany ho toetra iray hafa amin'ilay Mario Kart malaza amin'ny alàlan'ny Google Maps.
Ny Unfold dia manandratra ny Instagram Stories ho amin'ny sehatra mahavariana
Ho an'ireo mpampiasa Instagram mitaky fitakiana be indrindra dia teraka i Unfold, fampiharana ahafahanao mamorona tantara Instagram mahaliana sy kanto kokoa.
Ny workflow dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny asan'ny sarontava sary
Workflow, ilay fampiharana ahafahantsika mandeha ho azy ny lahasa amin'ny iPhone, iPad ary Apple Watch, dia nahazo fanavaozana vaovao miaraka amin'ny sarontava sary vaovao.
Makà Super Mario Run amin'ny antsasaky ny vidiny noho ny fampiroboroboana Nintendo
Nintendo dia nanambara fivarotana vaovao an'ny Super Mario Run, fivarotana iray izay hanomboka amin'ny 10 martsa ary ho hita hatramin'ny 25th.
Google Maps dia manampy ny fahitana Street View ao amin'ny valan-javaboary 11 Disney
Ireo tovolahy ao amin'ny Google Maps dia manampy ireo valan-javaboary malaza Disney any Etazonia mankany amin'ny Street View mba hahafahantsika mivezivezy araka izay itiavantsika azy.
Halide dia tsy diso anjara amin'ny fanavaozana ny tenany mba hisarihana mpampiasa bebe kokoa amin'ny sehatra misy azy, ireo no vaovao izay ampidiriny ankehitriny.
Mahazo lahasa fikarohana vaovao ny rindranasa Google
Vao nahazo fampisehoana vaovao ny fampiharana Google mba hahafahantsika mahazo tombony be indrindra amin'izany amin'ny alàlan'ny app Messages.
Ento ny tranonao, lalao sehatra mahavariana ho an'ny rehetra
Ento ny tranonao, lalao sehatra vaovao izay mahomby amin'ny fampiharana ambony rehetra ary tena mahafinaritra izany.
Spotify dia mametra ny fampiasana fampiharana tsy nahazoana alalana
Mpampiasa Spotify 88 tapitrisa eo ho eo no mampiasa ny kaonty Maimaimpoana, ary amin'ireny dia toa mampiasa vondrona namboarina Spotify novaina izay mamela hihoatra ny fetran'ity serivisy maimaimpoana ity.
Waze dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny famintinana ny zotra
Ireo tovolahy ao Waze dia manavao ny iray amin'ireo mpitety finday tsara indrindra ho an'ny iOS amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny efijery ETA izay ahitantsika ny famintinana ny làlana horaisintsika.
Ny lalao ambany kokoa, lalao tsotra nefa mampiankin-doha momba ny fikarohana
Ny fikarohana Google dia maneho isan'andro ny zavatra tena mahaliana ny olona manerantany. Na izany aza, tsy mbola tonga ao amintsika mihitsy ny manao an'ity lalao video na vokatra fialamboly toa ny The Higher Lower Game ity.
Fahatsiarovana, farany, ilay mpitantana teny miafina tadiaviko
Remembear dia ny rindrambaiko hitantanana sy hamorona tenimiafina avy amin'ireo mpamorona ny TunnelBear, iray amin'ireo serivisy VPN tsara indrindra nanandramako.
Google dia manamafy fa miasa izy hanavao ny fampiharana Inbox amin'ny iPhone X
Ny fampiharana Google Inbox, izay itiavany antsika hitazona ny filaminana ao anaty boaty misy antsika, dia mbola tsy novaina tamin'ny iPhone X, na dia araka ny filazan'ny orinasa miasa azy aza.
Calzy 3, tsy kajy hafa fotsiny ho an'ny iOS
Te hanana fampiharana calculatera ho an'ny fitaovana iOS anao ve ianao? Diniho kely izao ny Calzy 3, calculatera izay tsy hamela anao tsy hiraharaha
Mpikatroka marobe no miantso fanaovana ankivy hanohitra an'i Apple amin'ny alàlan'ny fampiharana ny National Rifle Association
Mpilalao sarimihetsika amerikana maromaro no nanomboka nangataka ankivy tamin'ny Apple, iray andro farafahakeliny, hanaisotra ny fampiharana Apple TV amin'ity fikambanana ity.
Ny fiasa hanavotana ireo bitsika ao amin'ny Twitter dia azo alaina ao amin'ny fampiharana ofisialy
Ny fiasa hanavotana ireo bitsika hamaky mivantana avy eo amin'ny fampiharana Twitter dia efa azon'ny rehetra izao. Atorinay anao ny fomba fiasan'izany.
Google Drive dia manitatra ny isan'ny endriny tohanan'ny fampiharana ho an'ny iOS
Ny serivisy fitehirizan-dranon'i Google dia nanitatra ny fifanarahana miaraka amina endrika misimisy kokoa, mba hahafahanay mijery mialoha azy ireo nefa tsy mila misintona ny atiny ary manokatra azy amin'ny rindrambaiko an'ny antoko fahatelo.
iTunes Store dia hitsahatra tsy hiasa ao amin'ny Windows XP sy Vista amin'ny 25 Mey
Hatramin'ny 25 Mey, iTunes dia tsy afaka mifandray intsony amin'ny iTunes Store amin'ny solosaina rehetra tantanan'ny Windows Vista, ankoatry ny Windows XP.
Taorian'ny fitarainan'ny mpampiasa, nohavaozina ny YouTube ho an'ny Apple TV amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fijerin'ny famandrihana
Taorian'ny fitarainana avy amin'ireo mpampiasa mangataka ny takelaka famandrihana ao amin'ny app YouTube ho an'ny Apple TV indray, dia ahitsin'ny YouTube izany ary omeny amin'ny fanavaozana vaovao indray.
Ghostbusters dia ho tonga amin'ny iOS amin'ny fomban'ny Pokémon Go!
Tonga ao amin'ny iOS amin'ny endrika Pokémon Go! Ny Ghostbusters, manapa-kevitra ny hisambotra matoatoa rehetra.
Iray amin'ireo mpanorina ny WhatsApp, manangona vola 50 tapitrisa dolara amin'ny Signal
Ny fampiharana fifandraisana azo antoka Signal, dia nahazo famatsiam-bola 50 tapitrisa dolara avy amin'ny iray amin'ireo mpanorina ny WhatsApp
1Password dia manampy fiasa izay hilaza aminao raha tafaporitsaka ny teny miafinao
1Password dia manampy fiasa vaovao izay hanampy anao hahafantatra raha voaroba tamin'ny Internet ny teny miafinao. Ary fisaorana ho an'ny mpamorona ny serivisy Pwned
Salama. no fampiharana ilainao hanombanana Mac.
Miarahaba. ho azonao atao ny manome lanja ny Mac faharoa toy ny hoe manam-pahaizana ianao. Ianao dia hahazo ny sandan'ny Mac amin'ny fanontaniana vitsivitsy ary ho marina amin'ny fivarotana sy fivarotana rehetra ianao.
Afaka mamoaka pikantsary hatramin'ny 10 amin'ny fampiharana azy ireo ankehitriny
Apple dia nanitatra ny pikantsary azo atolotra ho an'ny mpamorona satria ny fampiharana dia 5 ka hatramin'ny 10.
Ny Cabify dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao sy interface interface
Ny fampiharana dia iray amin'ireo tanjany, noho izany dia nanapa-kevitra ny hanavao azy ireo izy ireo mba hitazomana izany hatrany sy hanolotra ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra.
Nohavaozina ny Twitterrific ka mahatonga azy hifanaraka amin'ny fisintomana sy ny fidinan'ny iOS 11
Ny rindranasa Twitterrific dia navaozina indray tamin'ny alàlan'ny fanampiana ny drag and drop function, fiasa iray ahafahantsika misintona ny atin'ny Twitterrific amin'ny iPad iray hafa ihany.
Ny boky Fariña dia napetraka ho iBooks Store be mpividy indrindra taorian'ny fakana an-keriny azy ara-pitsarana
Taorian'ny fakana an-keriny fisamborana azy taorian'ny fitoriana nataon'ny ben'ny tanànan'i O Grove teo aloha tao amin'ny boky Fariña, dia nanjary boky be mpividy indrindra tao amin'ny iBooks Store ilay asa.
Ny Dropbox dia nohavaozina tamin'ny fanatsarana ny fizarana anjara
Ny serivisy fitahirizana Dropbox dia manohy manatsara ny fiasa sy ny safidy atolotray antsika rehefa mifanerasera amin'ireo rakitra izay efa notahirizinay tao amin'ny kaontinay.
Ny zavatra havaozina amin'ny fiasa telo vaovao sy mahaliana
Ny rindranasa famokarana Things 3 dia nohavaozina amin'ny kinova 3.4 manampy endri-javatra vaovao telo tena mahaliana ho an'ireo mpampiasa izay mbola tsy nanapa-kevitra ny hividy ilay fampiharana.
Alto's Odyssey dia misy amin'ny iPhone, iPad ary Apple TV izao
Alto's Odyssey androany dia azontsika atao ny misintona azy ao amin'ny iOS App Store ho an'ny iPhone sy iPad, ary eny, fisehoana tsara amin'ny tvOS ho an'ny Apple TV.
Kitendry Nuance Swype manao veloma
Ny keyboard Swype dia ajanona ho an'ny iOS sy Android. Nuance, mpamorona, dia nanapa-kevitra ny hifantoka amin'ny zavatra hafa ary handao azy.
Nohavaozina ny Nike + Run Club amin'ny alàlan'ny fanampiana fanamby vaovao hanentanana antsika hanao fanatanjahantena bebe kokoa
Ny ankizilahy Nike + Run Club dia manavao ny fampiharana azy ireo ho an'ny iOS hahafahanay miomana amin'ny hetsika fahavaratra, mahazo loka vaovao ary mifaninana amin'ny fiarahamonina Nike +.
Google Calendar dia efa mamela antsika hanampy kaonty telo amin'ny kalandrie
Ny rindranasa hitantanana ny kalandrie Google amin'ny iPhone, Google Calendar, dia vao nohavaozina izay ahafahantsika manampy kaonty Google miisa 3, miaraka amin'ny kalandrie tsirairay avy.
Google Maps ho an'ny iOS dia nohavaozina miaraka amin'ny bokotra vaovao
Google Maps ho an'ny iOS dia nahazo fanavaozana tena mahaliana. Izy io dia mitondra hitsin-dalana vaovao ao amin'ny pejy fandraisana izay ahafahantsika mahita serivisy, ny toetoetran'ny fifamoivoizana na ny fitateram-bahoaka
Photos Companion, ny rindranasa vaovaon'i Microsoft handefasana sary amin'ny PC
Misaotra ny fampiharana Photo Companion vaovao, ny famindrana sary avy amin'ny iPhone na iPad mankany amin'ny Windows 10 PC dia asa tena tsotra ary ambonin'izany rehetra izany.
Ny CEO CEO Flipboard dia nilaza fa ny fampiharana Apple News dia miorim-paka tamin'ny lasa
Raha ny filazan'ny Tale jeneralin'ny Flipboard dia nijanona teo aloha niaraka tamin'ny fampiharana News i Apple, satria manome tombony mitovy amin'ny sehatra misy azy io raha hizara lahatsoratra sy rehefa hiteraka fidiram-bola.
Ny mpanjifa mailaka Spark dia nohavaozina mamaha lesoka isan-karazany
Iray amin'ireo mpanjifa mailaka tsara indrindra ho an'ny iOS, Spark, izay vao nohavaozina tamin'ny famahana olana maro izay natolotry ny fampiharana tato anatin'ny volana vitsivitsy
Alto's Odyssey dia ho tonga amin'ny iOS sy tvOS amin'ny 22 Febroary
Tsaroantsika fa ny Alto's Odyssey dia nambara tamin'ny 22 febroary ho avy taorian'ny fanemorana maro.
Tonga amin'ny kinova 3.0 ny VLC miaraka amin'ny fanohanan'ny App Files sy FaceID
Ilay mpilalao horonan-tsary tsara indrindra ho an'ny iOS, ary saika misy sehatra rehetra, dia navaozina nanampy fanampiana ho an'ny FaceID, hisintona ary hampidina ary ny fampiharana Files.
Ho maimaim-poana ny fanandramana an'i Mario Kart ho an'ny iOS, Nintendo dia mampiasa teknika mitovy amin'ny Super Mario Run
Toa nanome valiny tsara tamin'ny Super Mario Run rehefa nanolo-kevitra ny hampiasa fomba mitovy amin'ilay lalao vaovao ho an'ny iOS miorina amin'ny Mario Kart ny orinasa Japoney.
Ny Twitter dia manidy ny telovolana voalohany amin'ny tombony azo amin'ny tantarany
Sambany tao anatin'ny 12 taona nijoroany, ny tambajotra sosialy bilaogy bitika dia nahazo tombony tamin'ny telovolana farany 2017.
Ny manager mail Outlook dia nohavaozina manampy asa vaovao
Ny mpanjifan'ny mailaka an'i Microsoft, Outlook, dia navaozina nanampy fanatsarana marobe rehefa nitady tamin'ny fampiharana, fanatsarana izay hampiharina tsikelikely
Ny mpanampy an'i Microsoft, Cortana, dia azo alaina amin'ny iPad izao
Vao tonga teo amin'ny iPad ny mpanampy an'i Microsoft, Cortana, mba hahafahan'ny mpampiasa mifanerasera aminy toy ny hoe manao izany amin'ny alàlan'ny Windows 10 PC, raha toa ka mihazakazaka eo aloha ilay fampiharana.
Ny fizarana sary vetaveta momba ny ankizy amin'ny alàlan'ny Telegram no antony nanesorana azy ireo vetivety tao amin'ny App Store
Herinandro taorian'ny fisintonana miafina ny fangatahana Telegram tao amin'ny App Store, dia fantatray ihany ny antony, antony iray mifandraika amin'ny pôrnôgrafia amin'ny ankizy.
Sago Mini Friends, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana asehonay anao anio, dia mikendry ireo ankizy kely an-trano eo anelanelan'ny 2 sy 4 taona ary antsoina hoe Sago Mini Friends, lalao iray hanombohan'ny ankizy mianatra lafin-javatra sasany amin'ny fiainana.
Manazava ny fomba ahafahana miditra amin'ny WhatsApp avy amin'ny Apple Watch izahay, mamaky ny hafatra, mijery ny sary na manoratra hafatra aza, avy amin'ny Apple Watch daholo.
Ireo tovolahy avy amin'ny Youtube TV dia nandefa ny fangatahana ofisialiny ho an'ny Apple TV mba hahafahantsika mankafy ny famandrihana anay amin'ilay kinova Youtube misy karama.
Swift Playgrounds dia nohavaozina manampy fiasa vaovao manan-danja
Nahazo fanavaozana vaovao ny rindranasa Apple Swift Playgrounds izay ampidirina ny asa sy fanatsarana vaovao ka ny fianarana manao programa dia asa mora kokoa ho an'ny ankizy kely fa tsy dia tanora loatra.
Ny Polymail dia nohavaozina ary ankehitriny dia manome fidirana amin'ny olon-drehetra avy amin'ny tranonkala iray
Nahazo fanatsarana ny fampiharana fitantanana mailaka malaza ho an'ny iO sy Mac Polymail. Anisan'ireny, ny tena misongadina indrindra dia ny Polymail Web
Raha te hahalala ianao hoe iza no manaraka anao na nijanona tsy nanaraka anao tao amin'ny sehatra Instagram ary fantaro ny antony, ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fampiharana tsara indrindra hahalalana hoe iza no nijanona tsy nanaraka anay tao amin'ny Instagram.
Ny Apple Maps Lane dia afaka mahazo ny lalana mankany Nouvelle-Zélande, Belzika, Suède ary Netherlands
Ny lahasa notarihin-dàlana izay nidina tao amin'ny Apple Mas tamin'ny fahatongavan'i iOS 11, dia tonga tany amin'ny faritany efatra vaovao, noho izany io serivisy io dia efa misy amin'ny firenena folo.
Piozila Deluxe Deluxe miaraka amin'ny The House of da Vinci
Ny tranon'ny da Vinci, lalao video izay ahitantsika ny fahaterahana indray ary hitsidihana ireo famoronana tsy mampino hamaha ankamantatra.
Amazon dia manavao ny fampiharana Kindle mampifanaraka azy amin'ny iPhone X sy ny iPad Pro 10,5-inch
Efa ho telo volana taorian'ny nanombohan'ny iPhone X sy volana vitsivitsy taorian'ny nanombohan'ny iPad Pro 10,5-inch dia nanavao ny fampiharana Kindle fotsiny i Amazon hamaky boky ao amin'ny iOS
Ny Clips dia nohavaozina tamin'ny fampidirana marika sy afisy Taom-baovao Sinoa vaovao
Ilay mpamorona horonantsary fohy mahatsikaiky nataon'i Clips dia nahazo fanavaozam-baovao vaovao misy ny marika sy afisy vaovao hankalazana ny Taom-baovao Sinoa.
Ny iOS 11.3 dia hamela antsika hanivana ireo fanombatombanana amin'ireo rindranasa App Store
Ny kinova farany an'ny iOS 11.3 dia hahafahantsika manisa ny isa araka ny daty sy ny karazany.
Hitsahatra tsy hanohana an'i Miitomo i Nintendo
Ny fidirana voalohany amin'ny Nintendo amin'ny sehatra finday dia ny Miitomo, lalao izay tsy hahazo fanohanana intsony avy amin'ny ...
Apple dia hamerina hanamboatra ny boky mampifanaraka azy amin'ny endrika vaovao an'ny App Store
Araka ny voalazan'i Bloomberg, iBooks, ankoatry ny fanovana anarana azy ho boky ao amin'ny iOS 11.3, dia handalo fanarenana tanteraka amin'ny fanombohana ny iOS 12
DuckDuckGo browser dia nohavaozina miaraka amina endrika vaovao hisorohana ny soritra
Ny browser DuckDuckGo dia navaozina nanampy fiarovana tsara kokoa rehefa mandefa angona avy amin'ny fitaovantsika amin'ny Internet, miaro antsika amin'ny fidirana mety ananan'ny ISP antsika
Ny TestFlight dia nohavaozina mamela ny fampidinana ireo fampiharana hatramin'ny 150 MB miaraka amin'ny tahan'ny data
Vao nohavaozina ny fampiharana developer TestFlight, mampitombo ny fetran'ny fampidinana ny app amin'ny alàlan'ny angon-drakitra finday hatramin'ny 150 MB, mitovy amin'ny tarehimarika natolotry ny App Store taminay hatramin'ny nanombohan'ny iOS 11.
Hampihenjana an'i Siri na mpampiasa marobe, fanatsarana hita ho an'ny HomePod ho avy
Amin'ny alàlan'ny icography an'ny iOS 11.2.5, nahitana asa vaovao an'ny HomePod sy Siri. Multi-mpampiasa sy ny fahaizana moana
Fiainana anaty afo miaraka amin'ny lalao video It's Spicks
Feno Sparks, lalao video iray izay mahazo fanamarihana mahafinaritra avy amin'ireo manampahaizana manokana sy mpampiasa azy ireo mihitsy.
Screeny 2.0, ny fomba tsara indrindra hitantanana ny sarinao amin'ny iPhone na iPad
Mitady mpitantana sary sy horonan-tsary tsara ho an'ny iPhone na iPad ve ianao? Tena mahaliana ny zavatra atolotry ny Screeny 2.0 anao
Ahoana ny fomba hampiasana ny maody maizina vaovao ao amin'ny fampiharana YouTube ho an'ny iOS
Youtube dia nohavaozina ao amin'ny App Store, ao anatin'izany ny maody maizina. Asehonay aminao ny fomba fanamboarana azy mba ho hafa ny fijerin'ny iPhone anao amin'ny tarehin-javatra maivana.
Ahoana ny fomba hisorohana ny mpanaraka Instagram antsika tsy hahafantatra ny fotoana farany nampiasantsika ilay rindranasa
Ny fiasa vaovao nampidirin'ny Instagram, dia ahafahan'ny mpanaraka antsika rehetra hahafantatra amin'ny fotoana rehetra hoe inona no fotoana farany nidirantsika tamin'ny fampiharana. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba ahafahantsika manafoana io asa io.
Ahoana ny fomba hampijanonana ireo fampidinana mandeha ho azy amin'ny fitaovana iOS rehetra
Fomba tsara hampiatoana ny fisintomana mandeha ho azy, azontsika atao ny manakana ireo rindranasa izay vidintsika amin'ny iPhone tsy hisintona ihany koa amin'ny iPad na ny mifamadika amin'izany.
Apple dia mamolavola ny interface ny kinova web an'ny App Store miaraka amin'ny fisehoana mitovy amin'ny an'ny iOS
Apple dia nanamboatra endrika indray ny interface web an'ny App Store miaraka amina endriny saika hitantsika amin'ilay hitantsika ao amin'ny fivarotana fampiharana 11.
Siri izao dia mamela anao hihaino ny vaovaon'ny andro amin'ny endrika Podcast
Apple dia miasa manampy ny fiasa vaovao ho an'i Siri miaraka amin'ny fahatongavan'ny iOS 11.2.2: hahafahanao mihaino ny vaovao isan'andro amin'ny endrika podcast
WhatsApp dia mandalina ny fomba hisorohana ny SPAM eo amin'ny sehatra fandefasan-kafatra
Mampalahelo fa miha-mahazatra ny mandray hafatra SPAM amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra manerantany: WhatsApp. Nilaza ny orinasa fa miasa hampihenana azy io kanefa afaka manaraka torohevitra vitsivitsy izahay
Havaozina ny fampiharana YouTube ary manampy maody maizina
Ny mpampiasa sasany amin'ny rindranasa YouTube dia manambara fa nahazo fanavaozana izy ireo, izay laharana 13.01.4 izay mampifangaro ny mety hanampiana fomba maizina amin'ny rindranasa, safidy iray izay tonga hatrany amin'ny ekosistema Android ihany koa.
Fampiharana IPhone hanalana ny angona EXIF ​​amin'ny sary
Raha tsy afaka miandry hody ianao hizara ny sarinao fa te hamafa ny angon-drakitra EXIF ​​ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny rindranasa 4 hahafahana mamafa ny data EXIF ​​amin'ireo sary raisinay miaraka amin'ny iPhone. .
Ny fampiharana IFTTT dia navaozina farany ho an'ny iOS 9
Ny fanavaozana farany ny fampiharana IFTTT no ho farany izay hifanaraka amin'ny iOS 9, ary noho izany dia miaraka amin'ny iPhone 4s, terminal izay nahazoany fanavaozana farany dia io.
Andramo amin'ny Nonstop Chuck Norris ny fahaizanao
Nonstop Chuck Norris, ilay lalao arcade vaovao natombok'i Flaregames miaraka amin'ity toetra mampiavaka azy ity ho mpilalao fototra, sahy ve ianao?
House of Terror VR dia mitondra zava-misy virtoaly sy tahotra amin'ny iPhone
Fomba iray tena mahaliana hankafizanao mankafy ny Virtual Reality amin'ny iPhone anao noho ny House of Terror VR.
Ny app Transmit an'ny iOS dia handao ny App Store
Ny rindranasa Transmit hitantana ireo rakitra misy mpizara amin'ny alàlan'ny FTP, dia handao ny App Store tsy ho ela, noho ny zava-misy fa tsy manonitra ny fikolokoloana azy ny varotra.
Ny fahalianan'ny mpamorona ny zava-misy marobe dia nihena tato anatin'ny volana vitsivitsy
Araka ny angon-drakitra avy amin'ny Apptopia, ny fahalianan'ny mpamorona ny zava-misy marina dia nitotongana tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Nahazo 30% bebe kokoa ireo mpandraharaha Apple tamin'ny taona 2017
Raha ny angona farany natolotry ny Apple dia nitombo 2017% ny vola azon'ny mpandrindra nandritra ny taona 30 raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa.
Plusdede dia nohavaozina miaraka amin'ny fanavaozana feno ny fampiharana
Plusdede, izay mpandimby an'i Pordede tara, dia mbola hita ao amin'ny App Store ary manome antsika fidirana amin'ny sarimihetsika sy andian-tantara rehetra misy amin'ny fahitalavitra sy amin'ny sinema amin'izao fotoana izao. Vao navaozina ity rindranasa ity miaraka amina endrika vaovao izay manatsara ny fifandraisana amin'ny app sy ny fiasa ao aminy.
Ny Geekbench 4 dia nohavaozina tamin'ny fampidirana ny iPhone 8 sy ny iPhone X amin'ny fampitahàna ny valiny
Ny vaovao farany Geekbench 4 dia manome antsika ny valiny azo tamin'ny maodely iPhone farany, hahafahana mampitaha ny fampisehoana amin'ny maodely teo aloha.
Telegram X dia nohavaozina manampy fiasa vaovao
Ny safidy hafa amin'ny fampiharana ofisialy Telegram, Telegram X, dia nohavaozina nanampy asa vaovao sy fanatsarana ny sasany amin'ireo efa misy nefa tsy mandeha tsara.
Ny fampiharana DJI ho an'ny iOS dia mifanaraka amin'ny iPhone X ankoatry ny fahazoana firmware vaovao ho an'ny Spark sy ny Phamtom 4 Pro
Ny fampiharana DJI hifehy ny Spark sy Phantom 4 Pro dia navaozina mba hifanaraka amin'ny iPhone X ary amin'ny fanatsarana ny sasany amin'ireo asany ary ny fanitsiana bibikely.
Ny app PayPal dia mifanaraka amin'ny iPhone X ankehitriny
Ny rindranasa fandoavam-bola elektronika PayPal dia nohavaozina ho an'ny iOS manampy ny fampifanarahana amin'ny iPhone X vaovao sy ny efijery misy ny volomaso eo an-tampony.
Telegram farany nahazo ny maody andrasana amin'ny alina
Rehefa afaka roa volana niandrasana dia navaozina ny fampiharana fandefasan-kafatra Telegra manampy mode night ho an'ny iPhone X
Microsoft Edge ho an'ny iOS dia hifanaraka amin'ny 1Password sy LastPass
Microsoft Edge ho an'ny iOS dia hanana fanavaozana vaovao tsy ho ela, izay hanatevenany ny mifanentana amin'ny LastPass sy 1Password
Ny workouts ++ dia mahazo ny fanavaozana lehibe indrindra amin'ny tantarany
Ny fanavaozana vaovao an'ny Workouts ++ dia mitondra fiasa vaovao marobe izay azontsika atao mba hankafizinay amin'ny fanamboarana ny fampiofanana ataontsika amin'ny Apple Watch.
Koins, mpanova vola minimalista ho an'ny iPhone sy iPad
Iray amin'ireo manova vola ve ianao isan'andro mba hahitanao raha afaka manangona vola ianao? Koins dia fampiharana mahaliana ho an'ny iPhone sy iPad
Google Maps dia nohavaozina amin'ny famolavolana endrika kanto vaovao
Ny fanavaozana farany ny fampiharana Google Maps ho an'ny iOS dia mitondra antsika fifandraisana vaovao misy loko vaovao
Fanavaozana ary eken'ny ROT ny sary mpamoaka sary
Ny sary RAW dia ahafahan'ny mpampiasa mifehy bebe kokoa amin'ny sary farany noforonin'ny mpampiasa, ankehitriny ny rindrambaiko Darkroom Photo Room dia manohana io endrika io.
Lalao iOS 5 mahafinaritra mihoatra ny euro iray monja
Mandritra ny andro vitsivitsy dia afaka mahita andiam-kilasy fihenam-bidy izay hitantsika mihoatra ny iray euro isika ao amin'ny App Store
Te hanandrana maimaim-poana tanteraka ny serivisy HiFi Tidal ve ianao? Lazainay aminao ny fomba
Araka ny notaterin'ny The Verge, manomboka ny 25 desambra ho avy izao, afaka manandrana maimaimpoana ny serivisy HiFi an'i Tidal mandritra ny 12 andro izahay.
Amazon dia nanao sonia fifanarahana handefasana ny andian-tantara Espaniola amin'ny serivisy VOD
Amazon dia nanao fifanarahana tamin'ireo tambajotram-pahitalavitra espaniola lehibe hanolorany ny atiny ao amin'ny serivisy VOD azy iray andro taorian'ny premiereany
Tonga ao amin'ny iPad ny sivilizasiôna VI, ny tetika tsara indrindra ho an'ny takelakao
Tonga tokoa amin'ny iPad ny sivilizasiôna VI mba hahafahanao mankafy ny iray amin'ireo lalao paikady tsara indrindra toa ny tsy noeritreretinao akory.
Ahoana ny fomba hijerena ny loteria Noely avy amin'ny iPhone
Raha tsy te hiandry ianao raha nahazo ny Lottery na ny vato, miaraka amin'ireo rindranasa ireo dia ho hitanao haingana
Wikipedia dia mamoaka maody maizina voatondro ho an'ny fampisehoana OLED
Ny maody maizina dia tonga teo amin'ny fampiharana Wikipedia ho fanampin'ny fanavaozana manan-danja hafa toy ny fihenan'ny fanjifana angona ao amin'ny iOS.
Pokèmon Go! hampihatra ny ARKit an'i Apple atsy ho atsy
Izao dia rehefa mandray tanana amin'ny iOS i Niantic ary mandray ny ARKit ho rafitra fiasan'ity lalao video mampiavaka sy mampiankin-doha ity.
Tsy azonao antoka izay homena amin'ny Krismasy? Miaraka amin'i Wream dia mora be izany
Raha mbola tsy fantatrao izay homena amin'ny Krismasy dia misaotra ny fampiharana Wream afaka fantatsika amin'ny fotoana rehetra hoe inona ireo fanomezana tadiavin'ny namantsika.
Hangouts izao dia manolotra fanampiana ho an'ny iPhone X
Ny rindranasan-kafatra hafatra Hangouts dia nahazo fanolorana vaovao farany, farany, fanohanana ny efijery iPhone X
Ny fampiharana Philips Hue dia nohamarinina ho an'ny iPhone X
Tsikelikely, ny rindranasa rehetra dia zatra ny interface an'ny iPhone X. Ny farany dia ny an'ny rafitra hazavana manan-tsaina Philips Hue.
Readdle Spark dia havaozina ny fanatsarana ny zava-bita
Androany ny orinasa mpamorona dia namoaka fanavaozam-baovao izay mikendry tanteraka ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fampiharana azy, Spark.
Ny mpanjifa ofisialy Reddit dia nohavaozina nanampy endrika vaovao marobe
Ny mpanjifa ofisialy Reddit, dia nohavaozina nanampy asa maro be hanatsarana, bebe kokoa aza raha azo atao, ny fiasan'izy io.
Infuse 5 manavao ny vidin'ny fampiharana ary tsy vaovao tsara izany
Ireo tovolahy ao amin'ny Firecore, mpamorona ny Infuse, dia nanavao ny vidin'ny fampiharana azy ireo, nampihena azy ireo ary nanampy famandrihana isam-bolana
Ny fampiharana fakan-tsary Halide dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny RAW sy ny teknolojia 3D Touch
Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra misy ao amin'ny App Store haka sary, Halide, izay vao nohavaozina nanampy fanatsarana sy fiasa vaovao
Miaraka amin'ny Rainbrow dia hampiasa ny volomaso sy ny fakantsary iPhone X hilalao isika
Ny lalao Rainbrow dia manome antsika traikefa lalao vaovao, izay tokony hampiasantsika ny volomasontsika hifehezana ny toetra amam-panahy, emoji iray.
Ny app audio chat ho an'ny Xbox dia ho avy tsy ho ela ao amin'ny iOS
Nanambara i Microsoft fa tsy ho ela dia hampahafantatra ny rindranasa an-tsoratra an-tsoratra sy an-tsoratra izay miasa miaraka amin'ny Xbox One.
Sintomy ary henoy ny podcast rehetra amin'ny Apple Watch miaraka amin'ity rindrambaiko ity
Tanjona MiniCast ity, hanomezana portability sy fahalalahana amin'ny fomba fanahanay ny Podcasts, fomba hafa mahaliana.
Tonga ao amin'ny App Store ny indie klasika INSIDE, tsy azonao hadino izany
Ny farany tonga tao amin'ny App Store dia ao anatiny, ity lalao indie lehibe ity dia namboarina tamin'ny iOS mba hahafahan'ny mpangataka sy olon-tsy fantatra mankafy azy io.
Dropbox Paper dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa finday
Ny fampiharana Dropbox Paper dia nohavaozina ary ankehitriny dia manampy asa vaovao ho an'ireo mpampiasa mampiasa azy amin'ny findainy na ny takelaka
Asphalt 8: Fanavaozana amin'ny alàlan'ny fiaramanidina miaraka amin'ireo fiara mifono vy vaovao sy fampifanarahana iPhone X
Ny fanavaozana farany izay entin'ny Asphalt 8 ho antsika: manolotra antsika mifanentana amin'ny fiara iPhone X sy ny fiara Hot Wheels vaovao i Airborne
Google Calendar dia mifanaraka amin'ny iPhone X ary misintona sy mitete
Iray volana mahery taorian'ny nanombohany, Google dia namoaka ny fanavaozana ny Kalandrie Google izay mahatonga azy hifanaraka amin'ny iPhone X
Zahao hoe ohatrinona ianao amin'ny banky amin'ny FinScore, avy amin'ny Fintonic
Te hahafantatra ve ianao raha hanome anao ny findramam-bola na fampindramambola ilainao? Jereo hoe inona no tsapan'ny bankinao momba anao mora sy haingana amin'ny Fintonic.
Ny mpamaky RSS Feedly dia nohavaozina mba hifanaraka amin'ny iPhone X
Ny fanavaozana farany ny Feedly, farany dia mitondra antsika ny fifanarahana nandrasana hatry ny ela miaraka amin'ny endrika efijery vaovao an'ny iPhone X ankoatry ny fampidirana maody alina
Ny tanànako: Fikolokoloana, lalao ho an'ny ankizy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny lalao maimaim-poana izay resahintsika anio, My Town: Daycare, lalao iray izay hikarakaran'ireo ankizy kely ireo zaza 6 ao amin'ny akanin-jaza
Pokémon Go dia navaozina hilalao amin'ny Pokémon an'i Hoenn
Ary io dia tamin'ny fanavaozana farany ny lalao Pokémon Go ho an'ny fitaovana iOS sy Android, a ...
Ny fampiharana Amazon Prime Video dia azo alaina amin'ny Apple TV
Betsaka ny volana nielezan'ny tsaho, fivoahana ary ny hafa momba ny fanombohana ny fangatahana Amazon Prime Video ho an'ny ...
Google manavao ny fampiharana Gmail hanohanana ny iPhone X
Nanavao ny fampiharana Gmail ihany ry zalahy tao amin'ny Google farany hanohanana ny efijery iPhone X vaovao ankoatry ny fanampiana ny kaonty IMAP.
Ianao ve mila fampiharana izay mitazona ny tsiambaratelo momba ny fifandraisana rehetra? TOC na The Other Contacts dia safidy tsara indrindra ho an'ity asa ity